HTC U 11 + rehashed version ကို ဇန်နဝါရီလမှာထုတ်လုပ်တော့မယ့် HTC! – AsiaApps
December 28, 2017 December 28, 2017 WilliamSmartphone NewsNo Comment on HTC U 11 + rehashed version ကို ဇန်နဝါရီလမှာထုတ်လုပ်တော့မယ့် HTC!
Rehashed version ဆိုတာကတော့ ရှိနေပြီးသား device တစ်ခုရဲ့ System အနည်းငယ်ကိုပြောင်းလဲလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခု HTC ဟာလည်း HTC U 11+ ကို rehashed version အနေနဲ့ ထုတ်လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Rehashed version အကြောင်းမစခင် HTC U 11+ အကြောင်းကို တစ်ဖန်ပြန်လှည့်ပါရစေ။ HTC U 11 + ဟာ နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်ကစပြီး UK ကနေ Pre-order လုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ HTC U 11+ လည်းထွက်ရှိထားတာအရမ်းကြီးတော့မကြာသေးဘူးဗျ။
The U11 Plus has snapdragon 835 chipset, 6GB of RAM, 128GB of storage and the screen is bigger at6inches.
U 11 + ဟာ ၂၀၁၇ အစပိုင်းလောက်မှာထွက်ရှိထားတဲ့ U Ultra နဲ့ U Play အစရှိတဲ့ U series ထဲမှာပါဝင်ပြီး Mid-range Smart phone အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် U 11 + ရဲ့ အသွင်အပြင် ဟာ U Play နဲ့ အနည်းငယ်တူညီနေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ U 11+ ရဲ့ Snapdragon က ၈၃၅ ရှိပြီး RAM ကတော့6GB ပါ။ Storage က 128 GB ရှိပြီး Display ပိုင်းက ၆ လက်မကျော် အထိရှိပါတယ်။ Touchscreen အပိုင်းမှာလည်း ၁၈ : ၉ အချိုး အထိရှိနေပါတယ်။ ဒါကတော့ U 11+ မှာပါဝင်မှုအချို့ပါ။
HTC will allegedly releasearehashed version of the U11+ in January, with mid-range specs which is expected to come with the Snapdragon 652 at the helm, 4GB of RAM, 64GB of storage, anda5.99″ 18:9 touchscreen.
ဇန်နဝါရီလာမှာ ထွက်ရှိလာမယ့် Hashed version ကိုလည်းတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်။ U 11+ hashed version မှာတော့ Snapdragon က ၆၅၂ ရှိပြီး RAM ကတော့4GB ပါ။ Display ပိုင်းက ၅.၉၉ လက်မအထိရှိပြီး Storage ကတော့ 64 GB ပဲပါဝင်ပါတယ်။ Touchscreen ပိုင်းကတော့ ၁၈ : ၉ အချိုးပါပဲ။
Hashed version မှာ System ပိုင်းအနည်းငယ် နိမ့်ချထားတာကြောင့် စျေးကတော့ ပိုပြီးသက်သာလာမှာပါ။ HTC company ဟာ Mid-range အမျိုးအစားကနေ Upper mid-range, High-end အစရှိတဲ့အမျိုးအစားတွေကိုဖြန့်ချီဖို့ ကြိုးစားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ U 11+ hashed version ကိုထုတ်လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ နောက်ထပ်ထွက်ရှိမယ့် U sereis ကတော့ U 12 ပါ။ HTC အနေနဲ့ U 12 ကိုတော့ Upper Mid-range (သို့) High-end အမျိုးအစားအနေနဲ့ထွက်ရှိလာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မျှော်လင့်ထားလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Getalook into the heart of the Transparent Black HTC U11+. #HTCU11Plus pic.twitter.com/9IGXzn7nsx
— HTC (@htc) December 27, 2017
Applications အမျိုးပေါင်း ၅၀၀ကျော်နဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးမယ့် IFTTT